Safiirka Mareykanka oo yimid Muqdisho iyo tallaabada ugu horreysa ee uu qaadayo | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Safiirka Mareykanka oo yimid Muqdisho iyo tallaabada ugu horreysa ee uu qaadayo
Muqdisho (Dalkaan.com) – Safiirka cusub ee Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Danjire Larry Andre ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho, ku dhowaad sanad kadib markii la magacaabay, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay safaaradda.
Qoraalka safaaradda oo lasoo dhigay Twitter ayaa lagu yiri “waxaan ku faraxsannahay inaan ku dhowaaqno imaatinta Danjire Larry Andre.”
“Waxa uu aad u daneynayaa inuu si iskaashi leh ula shaqeeyo shacabaka Soomaaliyeed, dalkooda iyo dowladda federaalka, si loo horumariyo hadafyada aan wadaagno ee dib usoo nooleynta Soomaaliya oo ah qaran ammaan, barwaaqo iyo dimoqraadi ah.
Danjiraha cusub ayaa Soomaaliya imanaya ayada oo ay ka jirto xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay muran aan dhammaad laheyn oo hareeyey doorashada xildhibaanada, taasi oo si cad loo musuq-maasuqayo.
Tallaabada ugu horreysa ee uu qaadayo safiir Andre ayaa la filayaa inay noqoto inuu madaxda Soomaalida ku cadaadiyo inay doorashada golaha shacabka kusoo dhameynayaan waqtiga ay dowladda Mareykanka u qabatay oo ah 25-ka Febraayo.
Dwladda Mareykanka ayaa horey ugu hanjabtay inay xayiraado la beegsan doonto kuwa carqaladda ku ah doorashooyinka Soomaaliya, haddii aan doorashada lagu soo dhameyn waqtiga loogu-talo-galay.
“Waxaan ugu baaqeynaa hoggaamiyayaasha federaalka iyo dowlad goboleedyada inay u hoggaansamaan jadwalka cusub ee la isku raacay, islamarkaana ay saxaan khaladaadka illaa hadda hareeyey hanaanka doorashada,” waxaa sidaas horey u yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka Ned Price.
Safiir Larry Andre ayaa sidoo kale la filayaa inuu kulamo la qaato madaxda dowladda federaalka, oo uu ugu horeyn doono madaxweyne Farmaajo, si uu warqadaha aqoonsi ugu gudbiyo.
Aqalka Senate-ka Mareykanka ayaa 18-kii December ansixiyay in Larry Edward Andre, Jr. uu noqdo Safiirka Mareykanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wuxuuna beddelay danjire Donald Yamamoto oo xilkaasi hayay tan iyo bishii October ee 2018.
Madaxweyne Mareykanka Joe Biden ayaa bishii April 2021 magacaabay Larry André Jr, oo ah rug caddaa muddo badan kasoo shaqeynayay.
André ayaa hore u ahaa safiirka Mareykanka ee Jabuuti intii u dhaxeysay November 2017 illaa January 2021, isaga 2014 kii ilaa 2017 soo noqday safiirkii Maraykanka ee dalka Mauritania.
Al-Shabaab oo markale weeraro culus ka fulisay KENYA + khasaaraha
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Nairobi (Caasimada Online) – Wararka laga helayo gudaha waddanka Kenya ayaa sheegaya in deegaano u dhow xadka Soomaaliya ay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab...
RUUSHKA OO 9-GOOBOOD OO MILATARIGA UKRAINE AY LEEDAHAY WEERARAY
Xog: Khilaaf ka dhex qarxay Qoor Qoor iyo ku xigeenkiisa iyo...
Ilo xoggagaala ayaa sheegaya in ay Arsenal dooneyso inay ciyaar...
Borussia Dortmund oo bixineysa qandaraas rikoor ah si ay uga dhaadhiciso...
Wafdi Talyaani ah oo ballan-qaad culus soo gaarsiiyey Xasan Sheekh kadib...